सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र बास्कोटाको समर्थकलाई खुल्ला पत्र Kasthamandap Daily
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र बास्कोटाको समर्थकलाई खुल्ला पत्र
रामहरि पाण्डे (हाल न्युजिल्याण्ड)
सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा दाई र समर्थकज्यु’हरुमा सादर नमस्कार,
यहाँहरुलाई, सञ्चो बिसन्चो सोध्नै परेन । हिमालपारिको देश न्यूजिल्याण्डमा रहे पनि यहाँहरु सञ्चै हुनुहुन्छ भन्नेमा सतप्रतिशत ढुक्क छु । सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुको उपस्थितिले त्यही देखाइरहेको छ । पशुपनिनाथसँग प्रथना गर्छु यहाँहरु सबैको कल्याण होस् ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा ‘दाई’ यहाँलाई विशेष आभार टक्र्याउन चाहन्छु । फेसबुक अनी ट्वीटरमा धमाकेदार र उटपट्याङ स्ट्याटसको पखाईमा रहनु भएका तमाम समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई एउटा राम्रो खुराक उपलब्ध गराई दिनुभयो । जो अहिले निकै बिकिरहेको छ । उनीहरुले आफुखुसी विश्लेषण गरेर तपाईको नाम र फोटोले आफ्नो कम्प्युटर र मोवाइलको भित्ता भरिरहेका छन् । अनि यसको हिस्सेदार बन्नु भएकोमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आएको साप्ताहिक कार्यक्रम सिधा प्रश्नका सञ्चालक राजु थापाज्युलाई पनि बधाइ दिन चाहन्छु । तपाई पनि के कम, सञ्चार मन्त्रीज्युकै हाइटमा नाम र फोटो जो आएको छ ।
मैले चिन्ने अवसर पाएसम्म यहाँहरु दुवै जनाको धारातल पत्रकारिता नै हो । साथै गोकुल दाईको राजनीतिमा पनि उत्तिकै सहभागिता रहँदै आएको कुरा लुकाउनै परेन । सबै सामु प्रस्ट नै छ । कार्यक्रम सञ्चालक थापा पनि पत्रकारितसंगै अन्य पेशामा बेलाबखत झुल्कदै आउने गर्नु हुन्थ्यो । जे भएपनि दुवै जनाको जग पत्रकारिता नै हो भन्दा फरक नपर्ला । यति भएपछि यहाँहरु दुवै जनाले इमान्दार, ब्यवसायिक र स्वच्छ पत्रकारिताको विकासमा कति योगदान पुु¥याउनु भयो त्यो भन्न सक्तिनँ । यदि भनिहाले भने पनि यहाँहरु दुवैलाई नपच्न सक्छ । त्यसैले तपाईहरुकै समर्थक र विरोधीहरुलाई विश्लेषणको जिम्मा दिन्छु ।
सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई म दाई भन्थेँ काठमाडौंमा रहेर पत्रकारिता गर्दा र अहिले पनि दाई नै भन्छु । त्यसैले मैले माथि नै दाई भनेर सम्बोधन गरेँ । भलै तपाईसँग प्रत्येक्ष भेट नभएको तीन वर्ष हुन लाग्यो । मलाई संकटको बेलामा आफ्नो पत्रिकामा रोजगारी दिएर निकै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ । शम्भु दाईको दृष्टि पत्रिकामा पनि काम गर्थेँ । त्यसले खान पुग्थेन । त्यसैले म पत्रकारिताबाट पलायन हुने सोच बनाउँदै गर्दा तपाईले आफ्नो पत्रिकामा काम दिनु भयो र मेरो पत्रकारिता इतिहासमा थोरै भए पनि योगदान पु¥याउनु भएको छ । जसले मलाई पत्रकारितामै लागि रहन मद्दत पनि गरेको थियो त्यतिबेला । पछि तपाईको पत्रिका छाडेर देवप्रकाश दाईको घटना र विचार पत्रिकामा काम गर्न पुगेँ । घटना र विचार पत्रिकामा काम सुरु गरेलगतै पत्रकारिताको नाममा दलीय राजनीति गरिरहेका र आफुलाई प्रेस चैतारीको मसिहा ठान्नेहरुले ‘जो अहिले पनि चौतारीकै कुनै कुनातिरै छन्’ रामहरि काँग्रेसमा गयो भनेर प्रचार गर्थे । पानी बाराबार जस्तै गर्थे, कुनै पनि कार्यक्रममा बोलाउँदैनथे । पछि बोधराज त्रिपाठीको सौर्य पत्रिकामा काम सुरु गरेपछि फेरी तीनै मसिहाहरु अब रामहरि एमालेमै फर्क्यो भन्दै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नतिर लाग्थे । बाटेको बाबियो जस्तै गरी । यस्ता व्यक्तिहरु अहिले प्रेस चैतारी नामक संस्थामै छन्, केही रिटायर्ड भए क्यारे ।
तर, तपाईले आफुमा भएको पुरानै स्वभावलाई अझै बदल्नुभएको रहेनछ । निकै दुःख लाग्यो । त्यही स्वभावले पहिले पनि तपाईलाई निकै क्षति पुगेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनका बेलामा त्यसबारेमा सचेत हुनुस् है दाइ भनेको थिएँ । तपाईको रुखो स्वभावले आफ्नो जिल्लाको पार्टी संगठनमा नराम्रोसँग पछि पर्नु भयो । आफ्नै भनिएकाले हराइदिए । पार्टीको होस या संविधानसभाको निर्वाचनमा तपाई पराजीत भएपछि सुरुमा तपाईको गुणगान गाउनेहरु रातारात विरोधी भइदिए । त्यतिबेलाका विरोधीहरु अहिले तपाईकै अघिपछि घुमिरहेका छन् । गुणगान गाइरहेका छन् । अनि तपाई आफ्नो स्तूती सुनेर मख्ख परिरहनुभएको छ । जसले तपाईलाई दीर्घकालिन भड्खालेमा जाक्दै छ ।
हो प्रश्न गर्ने कुनै पनि ब्यक्ति वा पत्रकार पुर्ण तयारीका साथ आउँछ । उसले हरेक कुरा सोध्न सक्छ । तपाईले ती सबै प्रश्नको जवाफ नम्रताका साथ दिन सक्नुपर्थ्यो । सक्नु भएन । त्यो तपाईको कमजोरी हो । तपाईले अर्को झन ठुलो गल्ती गर्नु भयो, कार्यक्रम बन्द गराएर । नेपाल टेलिभिजन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन अनुसार चल्छ । यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । मनोहरि थापा हुन् या सचिन रोका यि थपनाका पात्र मात्र हुन् । टेलिभिजनमा यिनको खासै हैसियत रहँदैन भन्दा हुन्छ । उनीहरु सञ्चारमन्त्रीकै इशारामा चल्छन् । यो इतिहास र वर्तमान दुवैले देखाइरहेको कुरा हो । र, तपार्ईकै निर्देशन अनुसार तपाईलाई अप्ठ्यारो पारेर प्रश्न गर्ने कार्यक्रमका प्रस्तोतालाई तह लगाउन ‘सिधा प्रश्न’ लाई बन्द गर्न लगाउनु भयो, तपाईका केही ‘अवसरवादी’ शुभचिन्तक बाहेक बाहिर सबैले यही बुझेका छन् । फेरी पनि भन्छु, यो तपाईको महा भुल होे ।
यदि यस्तै गर्ने हो, भने कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ‘तानाशाही’ सरकारबीच के नै फरक रह्यो ? त्यतिबेला पनि ज्ञानेन्द्र र उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्रिमण्डलका अधिकारीहरु विरुद्धमा बोल्ने र लेख्ने मिडिया अनि मिडियाकर्मीलाई बन्देज नै लगाइएको थियो । त्यस बारेमा तपाईलाई राम्रो जानकारी छ मलाई भन्दा ।
गोकुल दाईका समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा उभिएकाहरुलाई म सलाम गर्छु। हो, एकलाई पर्दा अर्को उभिनुपर्छ । तर, यहाँ नियतमा निकै खोट देखिन्छ । तपाईको जयजयकारले गोकुल बास्कोटा झन दलदलमा फस्दै छन् । उनलाई नाङ्गेझार पारेर बाटोमा दौडाइ रहनुभएको छ । त्यो तपाईहरुले सोच्नु भएन भन्ने लाग्छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रेस चैतारी र एमाले समर्थक कार्यकर्ताहरु लागेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी त चौतारीका ‘पत्रकार’ज्युहरु लाग्नु भएको छ । ‘...लाई चलायो गन्ध’ भने जस्तो गर्नु भयो । तील जत्रो विषलाई सुमेरु पर्वत बनाउनु भयो । तपाईहरु नै होइन साझा सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अन्ठसन्ठ प्रश्न गर्नेको समर्थनमा फेसबुक पेज भर्ने । खुसी साटासाट गर्ने । त्यो भुल्नु भयो ? अहिले सञ्चारमन्त्रीमाथि नियमसंग राखिएको प्रश्नलाई अनावश्यक प्रश्न गरियो । अघिपछि हल्कारुपमा प्रस्तुत हुने ब्यक्ति पुरा डकुमेन्टसहित उपस्थित भएर प्रश्न ग¥यो, अख्तियार गर्ने प्रश्न ग¥यो, आफ्नो दायारा बिर्स्यो आदि आदि भनेर पत्रु कमेन्ट गर्न रति पनि लाज लागेन तपाईहरुलाई ? तपाईहरुको यस्तो पोष्ट देख्दा आफैलाई दुःख लागेर आउँछ । कृपया विषयको वास्तविकताभित्र पुगेर सही र लगत छुट्टाएर त लेख्नुस । यदि सक्नुहुन्न भने चुप लागेर बस्नुस् । अनावश्यक रुपमा विषयलाई लम्ब्याउने काम नगर्दा राम्रो । आफ्नो नाक काटेर अरुको ... टाल्ने काम नगर्दा राम्रो भन्ने लाग्छ ।
ए बाबा ! यहाँ त कार्यक्रमनै बन्द गरिएको छ । मानौ भोलि समयले कोल्टो फेरेर कमल थापा वा अरु कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । र, त्यो सरकारको सञ्चार मन्त्रीले यसैगरी कार्यक्रम बन्द गरिदियो भन्ने तपाई के गर्नु हुन्छ ? मलाई लाग्छ, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भयो भन्दै सबै भन्दा पहिले सडकमा तपाईहरु नै पुग्नुहुन्छ । व्यक्ति नै पिच्छे विज्ञप्ति आउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा अहिले जसरी समर्थनमा लेख्नुभएको छ, पछि विरोधमा आउँछन्, यो देखिएकै कुरा हो । नपत्याए आफ्नै फेसबुक पेज पल्टाएर हेर्नुस । पुराना विज्ञप्तिहरु हेर्नुस् ।
अनि विरोध गर्नुहुने महान व्यक्तित्वज्यूहरु तपाईहरुलाई अरुको विरोध नगरी खाएको पच्दैन ? खाएको पचाउन विरोधनै गर्नु पर्छ है । लोकतन्त्रमा विरोध र समर्थन गर्न पाइन्छ । यो छुट छ । त्यसको पनि कुनै सीमा होला नि होइन र ? तपाईहरु आफ्नो मानो खाएर किन अरुको विरोधमा लाग्नु हुन्छ ?
कामकुरो एकतातिर कुम्लो बोकी... भने जस्तै गर्नु भएको छ, तपाईहरुले ।
तपाईहरुकै शुभ चिन्तक
हरि बराल हिजो आज सबै संचार माध्यमहरुमा बलात्कारका विषयमा प्रत्येकदिन समाचार प्रसारण नभएको ...
कृषिमा सरकारको लगानी, यसरी हुँदोरहेछ बालुवामा पानी
दिनेश बस्नेत दुध हामी सबैलाई मन पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनकै तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने पनि ...
राजनीतिक संस्कारले जन्माएका विकृतीहरु
जे.पी. केरुङ राजनीति विशुद्द समाजसेवा हो भन्ने मान्यतावाट विश्रृङखलित हुदै गईरहेको छ । ...
‘दशैं’ विजया दशमी २०७५ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
–दीर्घराज प्रसाई घटस्थापनादेखि नवरात्रसम्म गरिने नवदुर्गा भवानीको पूजा अति प्राचीन ...
बालिका सुरक्षा घरदेखि विद्यालयसम्मको दायित्व
गीता श्रेष्ठ विद्यालय पढ्नेदेखि दूधे बालिकासम्म बलात्कार र हत्याको शिकार हुँदा कसको मन ...
मुलुक साझा बनाउन राष्ट्रिय सोच आवश्यक
संगीता रेग्मी जनताले बनाएको संविधान लागू गर्न सिंगो देश लागेको छ । असमझदारी, फरक बुझाई र ...
फेरिएको शासन व्यवस्था र कार्यान्वयनको चुनौती
संगीता रेग्मी नेपालमा लामो संघर्ष र बलिदानबाट संघीयता स्थापित भएको हो । अहिले संघीयता शिशु ...
म गर्छु अब यो देशको नेतृत्व
रोयल राजा खतिवडा आजको दिनसम्म नेताले मात्रै जितेर देशले हारेको देश।अग्रगमनको नारा दिएर ...
रोजगारमुखी शिक्षाको खाँचो
बाबुकाजी कार्की नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी ...
गगनले दिए सरकारलाई चेतावनीः विगततर्फ फर्कन पनि तयार छौ
नेविसंघद्वारा कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा नारावाजी
सडकदेखि संसदसम्म अधिनायकवादको गन्धः तरुण दल
चितवनमा सवारी दुर्घटना बढ्यो, ६ महिनामा ९१ जनाको मृत्यु
हिउँ परेपछिको चन्द्रागिरि ...
नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना
प्रभु बैंकको बढायो ७० प्रतिशत नाफा